Fitsipi-entana fitaterana Uzbekistan airways
Ny teny ao Ozbekistana ho amin’izao tontolo izao, ny tsena dia miaraka amin’ny ny fampandrosoana haingana ny fifandraisana tambajotra izany, anisan’izany ny fitaterana an’habakabaka. Azia afovoany ny zotram-piaramanidina goavana indrindra Uzbekistan Airways dia miezaka mba ho feno ny fampiasana ny tsara ara-jeografia toerana misy ny firenena teo amin’ny sampanan-dalana ny lalana mampitohy Eoropa Atsimo Atsinanana.
Roa lehibe indrindra ny seranam-piaramanidina ny Tashkent sy Naoi dia hub seranam-piaramanidina ho an’ny Uzbekistan Airways. Dia manolotra ny fitaterana ny entana amin’ny entana efitrefitra ny mpandeha fiaramanidina manidina tsy tapaka, sy ny Sata sidina any misy tari-dalana momba ny Boeing ER entana hankeny. Isika ihany koa hanatanteraka ny fitaterana ny entana amin’ny voalahatra sidina amin’ny Boeing ER entana hankeny amin’ny alalan’ny Naoi, seranam-piaramanidina, izay nanokatra ny varavarany ho an’ny raharaham-barotra tontolo izao tamin’ny taona.
toy ny iraisam-pirenena intermodal fitaovana afovoany mampifandray ny tena pitaovana foibe ny any Eoropa sy Azia
Ny entana ara-potoana tao amin’ny tandrify hampiasa ny fahaiza-manaony no namorona vondrona iray ho an’ny famandrihana cargoes. Mampidi-doza cargoes ireo vokatra na zavatra fa mety hampidi-manan-danja-doza ny fahasalamana, fiarovana na fananana, raha nentina avy ny rivotra sy izay sokajiana nifehy ny IATA ny fitaterana ny entana mampidi-doza. Ohatra, ny loko, maina ranomandry, vatoaratra, fiara, sns, dia voafehy ireo toy ny entana mampidi-doza ho an’ny fitaterana an’habakabaka. Noho ny fiarovana ny rivotra, ny fitaterana, ny shipper tsy maintsy hahazoana antoka fa ny vokatra na zavatra ireo araka ny tokony ho fantarina, fantatra, anaty baoritra, marika, ny soratra sy ny tahirin-kevitra araka ny ICAO toromarika ara-Teknika sy IATA DGR. Araka ny fitsipika ny zotram-piaramanidina ny famandrihana ny entana dia mba ho faty tsy teo aloha noho ny andro, ary tsy taty aoriana noho ny andro talohan’ny ny nomanina lasa